अन्तरवार्ता : यसपालीको मतदान पहाडको निम्ति राज्य उत्पीडन विरुद्धको रेफरेन्डम हो- राजु विष्ट - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनअन्तरवार्ता : यसपालीको मतदान पहाडको निम्ति राज्य उत्पीडन विरुद्धको रेफरेन्डम हो- राजु विष्ट
March 27, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
भाजपा प्रत्यासी राजु विष्टले नामाङ्कन पत्र भरेपछि खबरम्यागजिनले गरेको कुराकानी
मेरो राजनैतिक अभ्यासको निम्ति तृणमूल र विनय खेमा नै मेरो प्रतिवद्धताको स्रोत हो। स्थानीय भावनालाई कुठाराघात गर्ने शक्तिहरू देखेर नै मेरोमा यस क्षेत्रमा राजनीतिमा आएर त्यस्ता शक्तिहरूबाट उन्मुक्ति दिने आफुभित्रको विश्वास जन्मिएको हो। सबैले आ-आफ्नो कर्मको फल प्राकृतिक रूपमा नै पाउँछन्। उनीहरूले गरेको कर्मको फल जनताले ब्यालेट मार्फत दिनेछन्।
तपाईँबारे दार्जीलिङ निक्कै अनभिज्ञ छन्। उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
सम्पूर्ण भारतमा नै हामी गोर्खाहरू राजनैतिक रूपले पीडित छौं। त्यो पीडा भोगाईको सबै भन्दा ठूलो राजनैतिक केन्द्र भनेको दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्स हो। सबै भन्दा धेरै गोर्खा जनसंख्या एकमुष्ठ बसेकोले गर्दा अनि ऐतिहासिक कारणले भारतीय गोर्खाको राजनैतिक परिचय पनि यहि दार्जीलिङ भूमिले मात्र दिनसक्छ। यसैले दार्जीलिङ हाम्रो निम्ति राजनैतिक पुण्यभुमि हो। म युवा हुँ अनि मेरो राजनैतिक अभ्यास यही पुण्यभूमिबाट शुरू भएको छ। मलाई यस कुराको ज्ञान छ।
भाजपाले 10 वर्षसम्म आश्वासनबाहेक केही दिएन भनेर पहाडवासी आक्रोशित छन्, 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना प्रधानमन्त्रीसमेतले देखाएका हुन्, तर कुनै सपना पूरा गरेन। यस्तोमा तपाईँ भाजपाबाटै उम्मेदवार हुनुहुँदैछ, कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ पहाडको मुद्दालाई?
भाजपा एउटा यस्तो पार्टी हो, जसले देशको सुरक्षा अनि विकासलाई राजनीतिभन्दा पनि माथि राखेर हेर्दछ। हामीले भाजपालाई सही रूपमा हाम्रो मुद्दा व्याखा गर्नु सक्नुपर्छ। सायद यसभन्दा अघिका सांसदहरू त्यसो गर्नबाट चुके होलान्।
यसपाली केही राजनैतिक बौद्धिकहरूले जनजातिको मुद्दा उठाउँदा भाजपा त्यसबारे गम्भीर भएको कुरा मलाई थाहा छ। तर त्यो समय चुनावको धेरै नजिकैको समय थियो अनि त्यसलाई तकनिकी रूपमा पार लगाउन समयको अभाव भएको हुनसक्छ।
त्यो मुद्दा सर्वभारतीय स्तरमा एउटा न्याय हुनसक्ने मुद्दा थियो अनि दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्सको निम्ति एउटा नयाँ राजनैतिक प्रस्थापना बिन्दु बन्न सक्ने मुद्दा थियो।
म भाजपाबाटै उम्मेदवार भएकोले यस्ता धेरै विषय छन् जसलाई सम्बोधन गर्ने अवसर म पाउनेछु। यस लगायत यहाँ राजवंशी, आदिवासी, कोचे, मेचे, टोटो जस्ता रैथाने जातिसमुहका राजनैतिक अनि सामाजिक मुद्दाहरू पनि छन्।
उनीहरूको पीडा हाम्रो पीडाभन्दा अलग छैन। हामीले उनीहरूको पीडालाई पनि बोकेर एउटा सिङ्गो जनचेतना जन्माउनु सक्नुपर्छ। त्यसरी नै यहाँ बङ्गाली, बिहारी, मारवाडी, पञ्जाबी जस्ता धेरै भारतीय जात-जातिहरू छन्, उनीहरूलाई पनि न्याय र विकास दिनको निम्ति भाजपा प्रतिवद्ध छ। भाजपाले समावेशी राजनीतिलाई विश्वास गर्छ। त्यही समावेशी राजनीतिभित्र पहाडको उन्मुक्तिको बाटो तय गर्नेछौं।
यता त भूमिपुत्रको लहर छ। तृणमूलले भूमिपुत्र दिएको छ। भूमिपुत्र भन्नेहरूलाई तपाईँको भनाई के छ?
गोर्खा जातिले आफुलाई सर्व भारतीय स्तरमा प्रतिस्थापित गर्नु चाहेको छ भने म त्यही भारतको भूमिपुत्र हुँ।
सधैँ दार्जीलिङले गोर्खाहरूको मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो, तर आन्दोलन दार्जीलिङ जिल्लामा मात्र हुन्थ्यो। दार्जीलिङ बाहिरबाट दार्जीलिङका आन्दोलन र मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
भाषा आन्दोलनकाल म सानै थिएँ। तर मलाई थाहा छ त्यो प्रयास सर्वभारतीय प्रयास थियो। हामीले कुनै पनि मुद्दालाई सर्वभारतीय स्तरमा उभ्याउन सक्यौं भनेमात्र त्यो बलियो उभिनसक्छ।
तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म प्रौडहरू नै राजनीतिमा आउने परम्परा छ, तपाईँ राजनीतिमा कुन भिजन लेआउनु भएको हो?
राजनीतिमा जवान र प्रौड भन्ने हुँदैन। मेरो सोच नयाँ पीडिको नयाँ राजनैतिक अभ्यासभित्र पर्दछ। आजको विश्वमा राजनैतिक अभ्यास नयाँ परिपाटी कै छ। मेरो निम्ति पहिलो कुरा राष्ट्रियता र राष्ट्र सुरक्षा हो, त्यसपछि विकास र जनसुरक्षा हो।
तपाईँको क्षेत्र दार्जीलिङ तर हुनुहुन्छ मणिपुरको, बस्नुहुन्छ दिल्लीमा। दार्जीलिङको जनतालाई तपाईँलाई कसरी आफ्ना गुनासो राख्नु?
म ससुराली दार्जीलिङ जिल्लामा भएकोले गर्दा यहाँको पीडा र भोगाईबाट म अपरिचित छुइनँ। यहाँको सांसद भएपछि मेरो कर्मभुमि पनि यही माटोलाई बनाउनेछु। म वचनवद्ध छु, मेरो अधिक समय यहाँ नै बित्नेछ।
पहाडमा तृणमूल र विनय खेमाले गरिरहेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
मेरो राजनैतिक अभ्यासको निम्ति तृणमूल र विनय खेमा नै मेरो प्रतिवद्धताको स्रोत हो। स्थानीय भावनालाई कुठाराघात गर्ने शक्तिहरू देखेर नै मेरोमा यस क्षेत्रमा राजनीतिमा आएर त्यस्ता शक्तिहरूबाट उन्मुक्ति दिने आफुभित्रको विश्वास जन्मिएको हो। सबैले आ-आफ्नो कर्मको फल प्राकृतिक रूपमा नै पाउँछन्। उनीहरूले गरेको कर्मको फल जनताले ब्यालेट मार्फत दिनेछन।
पहाडको कम्युनिष्ट दल क्रामाकपाले पनि आरबी राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। अरू उम्मेदवार पनि उठेका छन्। उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
मलाई छोरा झैं ठानेर विश्वास गर्नुहोस्। यतिमात्र भन्न सक्छु। म तपाईंहरूको आवाज बन्न सकौं, मलाई त्यो भरोसा दिनुहोस्। आरबी राई सरप्रति मेरो श्रद्धा छ।
पहाड र तराईको भोट काटिने र तपाईँको विपक्ष तृणमूल काङ्ग्रेस र विनय समूहले जित्ने सम्भावना छ, यसबारे तपाईँको समिकरण के कस्तो छ?
तपाईंले भनेको समीकरण हिजोसम्मको हो। हिजोदेखि नयाँ समीकरणको यात्रा शुरु भयो। हिजोसम्म ग्यापमा जन्मिएको समीकरण भोलिदेखि तरल भएर जान्छ। म हार्नको निम्ति उम्मेदवार भएर आएको होइन। पहाडका दुई शक्तिशाली राजनैतिक दल गोजमुमो र गोरामुमोको चुनावी गठबन्धन अनि मधेशमा भारतीय जनता पार्टीको र यससँग जोडिएको संघ संस्थाको भूमिकालाई सतहमा देखिएको समीकरणले आकलन नगरेको राम्रो ठान्छु।
गोरामुमो र गोजमुमोले तपाईँलाई समर्थन गर्ने वित्तिकै गोरामुमो कार्यकर्ता, गोजमुमो कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने काम शुरु भएको छ। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
सत्यले हारेको इतिहास छैन। राज्य सरकारले जाति उत्पीडन गर्छ त्यो उनीहरूले हाम्रो निम्ति भोट मागिदिएको जस्तो हुनेछ। यो पालीको मतदान पहाडको निम्ति एक अर्थमा राज्य उत्पीडन विरुद्धको रेफरेन्डम पनि हो। सताउने काम केवल गोर्खालाई मात्र पनि होइन। बङ्गालमा बङ्गाली लगायत अन्य जातिको पनि गणतन्त्र खोसिएको छ। यहाँ विपक्षका नेताहरूलाई पक्राउ गरेर राज्यले हाम्रो हात बलियो बनाउँदैछ। चुनाव पछि भने यस्ता सबै मुद्दाहरूलाई एकत्रित गरेर न्यायको ढोका ढकढकाउने छौं।